Shiinaha Juda kiln - 100 tan / maalintii habka wax soo saarka -EPC warshad iyo soosaarayaasha mashruuca | Yahuuda
I. Ahmiyada ay leedahay soo saarida Tiknoolajiyad casri ah oo casri ah
Lime waa sheyga ugu weyn uguna muhiimsan ee wax soo saarka birta, soosaarida kaalshiyamka kaalshiyamka, soosaarka diidmada, soosaarka alumina. Gaar ahaan xilligan cusub, tikniyoolajiyad cusub, alaabooyin cusub ayaa sii wadaya inay soo saaraan walxaha kaalshiyamka oo aad iyo aad loo adeegsado. Tababarku wuxuu caddeeyay in tiknoolajiyada nuuradda casriga casriga ahi runtii ay tahay mid aad u macquul ah oo faa'iido u leh marin-u-helidda birta iyo shirkadaha birta, kaalshiyamka carbide, shirkadaha coking iyo wixii la mid ah. Waqtigaan la joogo, faa iidada halkii tan ee lime aad ayey uga badantahay faaiidada tan oo bir ah, tan bir ah, tan oo kaalshiyam ah, tan kook. Shirkadaha adeegsaday tikniyoolajiyada nuuradda casriga ah si weyn ayaa looga faa'iideystay, waxayna gaareen faa'iidooyin bulsho oo ballaaran. Si kastaba ha noqotee, shirkado badan ayaa xaddidan miyir-qabka maareynta dhaqanka iyo heerka maaraynta mana aysan soo saarin tikniyoolajiyad wax soo saar liin casri ah oo casri ah wali waxay ku tiirsan yihiin soosaarka liinta. Sidaa darteed, haddii aan rabno inaan si wanaagsan u xakameyno wasakhda wasakhda ciidda, waa inaan sidoo kale ku tiirsanaano hirgelinta nuuradda casriga ah ee lime si loo xalliyo dhibaatada dalabka.
Waxa loogu yeero tiknoolajiyada cusub ee lime foornada ayaa ah nidaam lime cilmiyeysan oo lime leh ilaalinta deegaanka, shaqada keydinta tamarta, farsameynta iyo otomaatiga. Sababtoo ah hanaankani wuxuu qaataa teknoolojiyadda kuleylka ee calcination-ka casriga ah, waxay si buuxda uga faa'iideysan kartaa tamarta, gaar ahaan gaaska wasakheeya deegaanka sida il tamar oo qashinka u beddelaya khasnad. Tani kaliya ma ilaalineyso deegaanka, laakiin sidoo kale waxay soo saartaa tayo wanaagsan iyo nuurad qiimo jaban. Faa'iidooyinka tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn, faa'iidooyinka dhaqaale iyo kuwa bulsho waa kuwo aad loo tixgaliyo. Tani waa muhiimada ay leedahay soo saarista nuuradda tiknoolajiyada cusub.
2. Noocyada tikniyoolajiyadda lime ee casriga ah
Waxaa jira foornooyin isku dhafan oo shidaal ah, taasi waa, shidaalka adag, kookaha, budada coke, dhuxusha iyo gaaska. Mashiinka gaaska waxaa ka mid ah gaaska qiiqa, gaaska foornada, kalsiyum gaaska dabada, gaaska foornada, gaaska dabiiciga ah iyo wixii la mid ah. Marka loo eego qaabka foornada, waxaa jira foornada wiishka, kilkilaha wareega, kilkilaha gacmaha, Vimast kiln (Galbeedka Jarmalka), Melz kiln (Switzerland), Fucas kiln (Italia) iyo wixii la mid ah. Isla mar ahaantaana, waxaa jira kilinta hawlgalka cadaadiska wanaagsan iyo kilkalka hawlgalka cadaadiska taban. Foornada isku dhafan ee casriga ah oo leh 800 mitir kuyuubik maalintii waxay soo saartaa wax ka hooseeya 500 iyo gaaska casriga ee gaaska leh oo leh 250 mitir cubic, gaar ahaan keydinta tamarta iyo bey'adda ilaalinta lime ee leh gaaska qiiqa iyo qiiqa gaaska foornada. Naqshadaynta iyo soo saarista "lime kiln long flame burner" waxay xallisay dhibaatada gubashada ee qiimaha kalooriga sareeya iyo ololka gaaska gaaska coke, oo si buuxda uga faa'iideysan kara gaaska coke ee hadhay. Laga soo bilaabo gaaska asalka ah ee gaaska coke “nalalka”, wasakheynta bay’ada oo loo galiyo tamar qiimo leh shirkadaha si ay u abuuraan faa iidooyin. Loogu talagalay shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee birta iyo birta ah, shirkadaha coking, kaalshiyamka carbide, iyo warshadaha diidan ayaa ah keydinta tamarta aad u wanaagsan, ilaalinta deegaanka, waxtarka iyo habab wax ku ool ah.
3.QODOBADA AASAASIGA AH IYO NIDAAMKA FARSAMADA
Qaybta ugu weyn ee nuuradda waa kaalshiyam kaarboonayt, halka qaybta ugu weyn ee nuuraddu tahay kaalshiyamka oksaydh. Mabda'a aasaasiga ah ee nuuradda gubanaya ayaa ah in lagu kala-jaro kalsiyumka kaarboonatka nuuradda si loo beddelo kaydinta kalsiyum oksaydhka iyo kaarboon laba ogsaydhka iyadoo la kaashanayo heer kulka sarreeya Qaaciddada falcelinta ayaa ah
Nidaamkeedu waa in dhagaxa nuuradda iyo shidaalka lagu diiriyo foornada lime (haddii dhuumaha gaaska gaaska iyo kuwa wax guba la quudiyo) oo laga dhigo 850 digrii, lagana dhigo 1200 digrii, ka dib la qaboojiyo oo laga soo dejiyo foornada. Nidaaminta calcination-ka oo buuxa waxay u dhigantaa in lagu qaado weel xiran. Qaababka foornada ee kaladuwan waxay leeyihiin kuleyl kala duwan, kalsiyeyn, qaboojin iyo habab rarka dambaska. Si kastaba ha noqotee, mabaadi'da geeddi-socodka qaarkood waa isku mid: heerkulka calcination waa 850-1200 digrii, heerkulka kululaynta waa 100——850 digrii. Heerkulka ash wuxuu ka hooseeyaa 100 darajo. Tayada alaabta ceyriinka ahi way saraysa, tayada liimku way wanaagsan tahay; qiimaha kaloriinta shidaalka waa sarreysaa, tirada isticmaalkeedu waa yar yahay; cabbirka walxaha dhagaxa nuuradu wuxuu u dhigmaa waqtiga kalinta; shahaadada waxqabadka dhaqsaha badan waxay u dhigantaa waqtiga calcination iyo heerkulka calcination.
Hore: Dilaa Yuhuudda- 300 tan / maalintii X4 Lime oo lagu dubto Luoyang, mashruuca gobolka Henan-EPC
Xiga: Golaha Khadadka Wax Soo Saarka Lime
Nidaamka Kaydka jirka 'Hopper body' waa qaab-dhismeed afar-geesle ah, gidaarka gudaha waxaa lagu siiyaa saxan balastar ah, dekedda bannaan ayaa laga sameeyay inta u dhaxeysa labada taariko ee isku dhegan, iyo dhamaadka hoose ee lakabka xiga ee saxanka baffle waxaa la siiyaa shaashad birqaya . Qaab dhismeedka qalabku waa mid fudud, wuu garan karaa shaqada keydka iyo keydinta kumeelgaarka ah iyada oo loo marayo saxanka baffle, waxyaabaha ku dhacaya hoosta shaashadda birqaya ayaa ka labis badan, shaqaduna waa in la ...
Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka,